Faysal Cali Waraabe Oo Sheegay Sabata kaliya Ee Aanay Soomaaliya Iyo Itoobiya u Heshiin Karin | Raadgoob
Faysal Cali Waraabe Oo Sheegay Sabata kaliya Ee Aanay Soomaaliya Iyo Itoobiya u Heshiin Karin
November 17, 2018 - Written by admin
Eng Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga ucid oo si weyn kaga hadla arimaha siyaasadda Soomaalida ayaa ka hadlay xidhiidhka u dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo Ethiopia iyo heshiisyada ay labada dowladood wada saxiixdeen.
Isaga oo la hadlayay dhalinyaro badan ayuu sheegay in Somalia hadda aysan awood buuxda u laheyn inay wax ku darsato dalka Ethiopia oo dowlad adag leh, islamarkaana shacabkiisu badan yahay.
Arinta ugu adag ee aan suurogal ka dhigeyn in Somalia ay Ethiopia wax ku darsato ayuu ku sheegay inay tahay in hadda Soomaalida kala daadsan yihiin oo awood buuxda aysan laheyn, sida uu hadalka u dhigay.
“Waa isaga leh Soomaaliya ayaan ku darayaa Ethiopia, ma maanta Soomaali meeleey wadan wax kula darsato miyay jirtaaba, Markaad awood leedahay ee aad dhisan tahay ayaa wadahadal la galaa, oo dal wax lagu darsadaa”.
“Markaad kala daadsan tahay oo aad afar madaxweyne iyo ka badan leedahay, dal waxba laguma darsado, waxaa waxa u geynayaa waxa weeye Somaliland aan soo aaso”ayuu yidhi Faysal Cali Waraabe.
Wuxuu sheegay in arintaasi ay dhibaato ku tahay Soomaaliya, islamarkaana Somaliland aysan cidna aasi karin sida uu hadalka u dhigay.
Dad badan oo siyaasiyiin ah iyo dadka falanqeeya arrimaha geeska Africa ayaa siyaabooyin kala duwan u dhaliilay xidhiidhka u dhaxeeya madaxda Ethiopia iyo Somalia iyo heshiisyada qaar oo labada dhinac ay kala saxiixanayaan.